Welcome | GO & GO Travels
GO & GO Travels and Tours Co., Ltd isaMyanmar owned travel company. It is one of the efficient and travel and tour service provider in Myanmar.Go and Go Travel and Tour, formed about seven years ago, has madeamark in the travel and tourism industry in the Myanmar with an undisputed reputation of high-end service, customer satisfactory travel and tour to Myanmar.
Yours Here Trading and Distribution Col.,Ltd
Yours Here was established in 2019 with its main office located in Yangon, Myanmar. Yours Here is one of the business which separated from GO & GO Travels and Tours Co.,Ltd which was established in 2005 and separated from Pyithu Dana Co.,Ltd. Yours Here is among the leading distributors fertilizer all Agricultural Zone in Myanmar, 100 % Cotton bed sheet set not only Myanmar but also Foreign Market , AVALONE Beauty and Cosmetic products in Myanmar. Yours Here is authorized agent and production Gowtham Industries. ... · gypsum mining and processing.
( ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသည့်နေ့) ရန်ကုန်မြို့ မှ ထိုင်းအဲဝေး လေကြောင်းဖြင့် ( ဝ၉း၅ဝ ) တွင် ထွက်ခွာ ပါမည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ သုဝဏ္ဏဘုံမိ လေဆိပ်သို ့(၁၁း၄၅) တွင်ရောက်ပါမည်။
ဆစ်ဒနီမြို ့နဲ့မယ်လ်ဘုန်းမြို့ကို ၅ ရက်တာ လည်ပတ်မည့် ခရီးစဉ်
ဂိုးလ်ကို ့စ် - ဆစ်ဒနီမြို ့နဲ့မယ်လ်ဘုန်မြို့ ကို ရ ရက်တာ လည်ပတ်မည့် ခရီးစဉ်
ရန်ကုန်-–ပတ္တယား - ဘန်ကောက် -အယုဒ္ဓယ( ၆ ရက် / ၅ ည )ရန်ကုန် - ဘန်ကောက် - ပတ်တရား
ရန်ကုန်မြို ့မှ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို ့သို့နံနက်ပိုင်းလေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွါပါမည်။
ဘုရားရှင်ကိုယ်စား အလေးအမြတ်ထားရာ ဗုဒ္ဓဂါယာဒေသသို့ ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူးခရီးစဉ်
4 Star Hotel ၏ ၂ ယောက်အိပ်ခန်းများတွင် တည်းခိုပြီး၊ လည်ပတ်မည့် အဆင့်မြင့် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်
We would like to introduce you 'Yours Here Gypsum Fertilizer'Nowadays an increasingly popular product in fertilizer market is Gypsum. Many farmers well known stone powder. Many companies distribute gypsum fertilizer with different trade names. Comet Gypsum, Mawnitar Gypsum, Sane Gypsum and Sin Phyu Taw gypsum etc. We are describing details about our gypsum fertilizer in the photo.
A visit to the magnificent and world famous Shwedagon Pagoda, known for its religious significance and artistic beauty. The massive bell-shaped stupa is plated with gold and ....
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် GO & GO Travels – Tour Leader မှ ခရီးဦးကြိုဆိုပြီး China Air line ( CI 7916 ) ဖြင့် နံနက် ၁၀း၃၀ အချိန်တွင် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွါပါမည်။ ထိုင်ဝမ်စံတော်ချိန် ၁၆း၂၀ တွင် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို ့ဆိုက်ရောက်ပါမည်။ လေဆိပ်တွင် မိမိတို ့ဧည့်လမ်းညွှန်မှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး.....
8 Ds7Ns London-Scotland-Ireland-London ( ၈ ရက်/၇ ည လန်ဒန်-စကော့တလန်-အိုင်ယာလန်-လန်ဒန်)
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ(၀၉း၅၀)အချိန်တွင် ထိုင်းအဲဝေးလေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာပါမည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသုဝဏ္ဏဘုံမိလေဆိပ်သို့ ထိုင်းနိုင်ငံစံတော်ချိန် နေ့လည်(၁၁း၄၅)တွင် ရောက်ပါမည်။ ၄င်းလေဆိပ်မှ (၁၂း၅၀) အချိန်တွင်ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။ လန်ဒန်မြို့သို့ အင်္ဂလန်စံတော်ချိန် ညနေ(၁၈း၅၅)တွင်ရောက်ပါမည်။ လေဆိပ်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး ဟိုတယ်သို့ပို့ ဆောင် check-in လုပ် ပေးပါမည်။ လန်ဒန်မြို့တွင် ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Hotel London Wembley (Or) Similar